JungleScout: Fitaovana sy fiofanana hanombohana ary hitombo ny varotrao amin'ny Amazon | Martech Zone
Tsy misy fanamafisana ny fiantraikan'ny Amazon amin'ny fivarotana sy ecommerce. Tsy lazaina intsony ny fahavoazana nitranga tamin'ny indostrian'ny mpivarotra noho ny areti-mandringana sy ny fanapaha-kevitra nanidy ny hanidy ny ankamaroan'ny mpivarotra antsinjarany.
Androany, maherin'ny 60 isan-jaton'ny mpanjifa no manomboka ny fikarohana amin'ny Internet any Amazon. Ny vola azon'i Amazon avy amin'ireo mpivarotra eo amin'ny tsenany dia nitombo maherin'ny 50 isan-jato tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny taona lasa.
2021 dia hitondra fiovana lehibe ho an'i Amazon sy ireo mpivarotra ao aminy
Tsy misy dikany aho an Amazon Prime mpiantsena ary mankafy ny fahafinaretana amin'ny fahazoana izay rehetra aterina any an-tranoko. Izaho dia manana an'i Amazon Key izay hametrahan'ny mpamily ireo fonosana soa aman-tsara ao amin'ny garaziko. Tsy mbola nankafy niantsena mihitsy aho, ka mahafinaritra ny fanaterana ny entako any an-tranoko.
Raha mivarotra vokatra ianao ankehitriny, na dia amin'ny fivarotana an-tserasera anao aza, dia tena ilaina tokoa ny mivarotra amin'ny Amazon. Misy lafy ratsy, mazava ho azy. Ny vokatrao dia haseho mifanila amin'ireo mpifaninana aminao. Ny mpifaninana aminao dia mety ho lafo kokoa na hanana fifanarahana tsara kokoa. Ary… tsy voafehinao ny traikefa fiantsenana amin'ny alàlan'ny fankanesana any Amazon.
Voaozona izy raha manao izany, voaozona raha tsy manao izany ianao. Amin'ny maha orinasa antsika, isika rehetra dia mila manao sorona kely hihaonana amin'ny mety ho mpividy ho an'ny vokatra sy serivisintsika. Tsy misy isalasalana fa afaka mampitombo be ny orinasanao amin'ny Amazon ianao ary mandrefy mora foana ny orinasanao.
Atombohy ny fivarotana amin'ny Amazon
Tahaka ireo tsena lehibe rehetra, ny fanambinao lehibe indrindra dia ny fomba hamantarana ny fotoana ahafahana manatsara sy manao dokam-barotra ny vokatrao hanararaotana ny lamina karoka ho an'ny mpanjifa ary tsy hivadika amin'ny fifaninanana amin'ny Amazon Advertising. JungleScout dia sehatra naorina hanamorana ny fivarotana anao. Io sehatra io dia ahafahan'ny mpivarotra Amazon mividy:
Research ary mahita vokatra be fangatahana amidy.
Amboary ny profitability amidy amin'ny Amazon.
Omeo anao ny fanofanana sy fanohanana ilainao eny an-dàlana.
JungleScout naorin'ny mpivarotra ho an'ny mpivarotra. Manolotra fampianarana manokana, torolàlana isaky ny dingana, fivoriana an-tsambo, fiofanana isan-kerinandro, vondrona atidoha ary maro hafa izy ireo!
miaraka JungleScout's Fahitana mitady, azonao atao ny mamaky teny fanalahidy be fangatahana avo lenta, hahitanao ny vokatra manana tombony be indrindra azo inoana amin'ny Amazon. Ny sehatr'izy ireo dia hanampy anao hamantatra ireo fironana sy hanivana ireo vintana amin'ny alàlan'ny fomba fijery tarihin'ny AI mba hahafahanao manamboatra am-pitokisana ny paikadim-bokatrao.
JungleScout's Product Tracker manampy anao hitahiry sy hanara-maso ny hevitry ny vokatra ka tsy ho very maina amin'ny fotoana iray. Araho ny vokatra na vondron-vokatra hanombanana ny varotra rehefa mandeha ny fotoana sy ny fironana, ny spikes tsy ampoizina ary ny fizaran-taona.
Azonao atao ny manombatombana vokatra mety ary tery ny fikarohana ataonao amin'ny sivana fikarohana vokatra feno indrindra, ary koa ny kajikajy tombony hanampiana anao hampitaha ny vidiny, ny vola miditra, ary ny sarany FBA isaky ny fahafahan'ny vokatra.
Aza hadinoina mihitsy ny fotoana ahazoanao hevitra. Scout an'ny Jungle Avereno jerena ny mandeha ho azy manasongadina tanteraka ny fizotry ny fangatahana famerenan'ny Seller Central manontolo hahafahanao mampiasa vola amin'ny fotoana iverenanao. Hamarino tsara fa ny fangatahana rehetra azo ekena dia mahazo fangatahana fandinihana, hanara-maso ny satan'ny fangatahana, ary hahita ny ora firaketanao aza.
Manomboha amin'ny JungleScout
Doka amin'ny Amazon
Amazon Advertising taloha fantatra amin'ny anarana hoe Amazon Marketing Services (AMS), no teny elo ampiasaina hamaritana ny vahaolana momba ny dokambarotra rehetra an'ny Amazon. Azo zaraina ho sokajy roa izy io:
Doka amin'ny Amazon - Amazon self-service PPC (Doka pay-per-click)
Doka amin'ny Amazon sy ivelan'ny Amazon - Amazon-Serivisy tantanana DSP (CPM, na vidiny isaky ny fahatsapana an'arivony, doka)
Amin'ny maha mpivarotra azy, na lehibe na kely, dia zava-dehibe ny fahafantarana tsara ireo fitaovana fanaovana dokambarotra samihafa atolotry Amazon — indrindra fa mitombo hatrany ny fifaninanana. Ireo tolotra feno dia voatanisa eto amin'ity torolàlana dokambarotra mahavariana ho an'ny mpivarotra avy ao ity JungleScout.
Torolàlana momba ny doka Amazon
Fahatanterahan'ny Amazon (FBA)
Na dia manolotra fitaovana hanatanterahana ny vokatrao aza i Amazon, dia azonao atao ihany koa ny manararaotra ny programa fahatanterahan'ny Amazon, FBA, mba hahafahanao mifantoka amin'ny vokatra, ny traikefa amin'ny fonosana ary ny ezaka ataon'ny varotrao. Ho an'ireo orinasa nanambola be tamin'ny fividianana vokatra na fanamboarana tsotra izao, safidy tsara ny FBA satria afaka mandefa mivantana any Amazon ianao ary izy ireo no hikarakara ny ambiny.
Amazon dia iray amin'ireo tambajotra fanatanterahana mandroso indrindra eto an-tany. Ny FBA dia mamela ny orinasanao hitahiry ny vokatrao ao amin'ny foibe fanatanterahana an'i Amazon, ary avy eo fonosana, alefan'ny Amazon, ary manome serivisy ho an'ny mpanjifa ny vokatrao.
Atsangano ny FBA - Mamorona ny Kaonty fivarotana Amazon, ary midira amin'i Seller Central mankany amboary FBA.
Mamorona ny lisitry ny vokatrao - Raha vao ianao ampio ny vokatrao mankany amin'ny katalaogin'i Amazon, farito ny lisitra FBA.
Omano ny vokatrao - Omano ny vokatrao amin'ny fitaterana azo antoka sy azo antoka mankany amin'ny foibe fanatanterahana, araka ny Torolàlana famonosana Amazon ary fitakiana fandefasana sy fitaterana.
Alefaso any Amazon ny vokatrao - Mamorona ny drafi-pandefasanao, manonta marika famantarana ny fandefasana Amazon, ary alefaso any amin'ny foibe fanatanterahana ny Amazon. Mianara bebe kokoa momba mandefa lisitra any Amazon.
Tags: AmazonAmazon Fbalaharana vokatra amazonafanarahana ny vokatra amazonafiofanana momba ny varotra amazonajunglesscoutfitaovana fikarohana vokatraamidy amin'ny amazona